Ukuqonda kwabaphulaphuli: Ubukrelekrele beCandelo loMphulaphuli kunye neSoftware yoHlalutyo | Martech Zone
Lwesine, Disemba 23, 2021 Lwesine, Disemba 23, 2021 Douglas Karr
Isicwangciso esibalulekileyo kunye nomngeni xa uphuhlisa kunye nokuthengisa uphawu kukuqonda ukuba ngubani imarike yakho. Abathengisi abakhulu bayasinqanda isilingo sokuqikelela kuba sihlala sinomkhethe kwindlela yethu. Amabali angeyonyaniso avela kubathathi-zigqibo bangaphakathi abanobudlelwane nemarike yabo bahlala bengawutyhili umbono wabaphulaphuli bethu kungenxa yezizathu ezimbalwa:
Awona mathemba aphakamileyo okanye abathengi ayingowona ophakathi okanye amathemba angcono okanye abathengi.
Ngelixa inkampani inokuba nesiseko somthengi esibalulekileyo, oko akuthethi ukuba inesiseko somthengi esifanelekileyo.
Amanye amacandelo awahoywa ngenxa yokuba emancinci, kodwa akufuneki abe ngenxa yokuba anokuba nembuyekezo ephezulu kutyalo-mali lwentengiso.
Idatha yezentlalo ngumgodi wegolide wokutyhila abaphulaphuli kunye namacandelo ngenxa yobutyebi, izixa ezikhulu zedatha ekhoyo. Ukufunda ngoomatshini kunye nokukwazi ukucubungula loo datha kwenza ukuba amaqonga achonge ngobukrelekrele amacandelo abaphulaphuli kwaye ahlalutye indlela yokuziphatha, enikezela ngemibono enokusetyenzwa abathengisi abanokusebenzisa ukujolisa ngcono, ukwenza umntu, kunye nokufezekisa iziphumo eziphezulu.
Yintoni Intelligence yabaphulaphuli?
Intelligence yabaphulaphuli kukukwazi ukuqonda abaphulaphuli ngokusekelwe kuhlalutyo lomntu ngamnye kunye nedatha edibeneyo malunga nabathengi. Intelligence yabaphulaphuli iiplatifti zibonelela ngengqiqo kumacandelo okanye uluntu olubumba abaphulaphuli, i-psychographics yabaphulaphuli kunye ne-demographics ngelixa bekwazi ukudibanisa amacandelo abaphulaphuli kumaqonga okuphulaphula kunye nohlalutyo lwentlalo, izixhobo zokuthengisa ezinefuthe, iiplatifti zentengiso yedijithali kunye nezinye iisuti zokuthengisa okanye zophando lwabathengi.
Audiense Insights Abaphulaphuli Intelligence
I-Audiense inceda iibrendi ukuba zichonge abaphulaphuli abafanelekileyo kunye nokuqonda okusebenzayo okunceda ukwazisa izicwangciso zokukhulisa ishishini lakho. NgeAudiense Insights, unga:
Chonga nabaphi na abaphulaphuli okanye icandelo- Abaphulaphuli ikuvumela ukuba uchonge kwaye uqonde nawaphi na abaphulaphuli, kungakhathaliseki ukuba yintoni ethile okanye ekhethekileyo yokwenza uhlalutyo lwabaphulaphuli bentlalontle. Ngomgudu udibanisa uninzi lweenketho zokucoca xa usenza ingxelo, njengeprofayile zabasebenzisi, iiaffinities, iidemographics kunye neendima zemisebenzi, udala amacandelo abaphulaphuli alungiselelwe umntu. Sixhobe nge Abaphulaphuli Insights ungatyhila ubukrelekrele babaphulaphuli ukwenza izigqibo ezingcono zentengiso, uhlengahlengise ujoliso lwakho, uphucule ukufaneleka kunye nokuqhuba amaphulo okusebenza okuphezulu kwinqanaba.
Ngoko nangoko uqonde ukuba ngubani owenza abaphulaphuli ojolise kubo - Abaphulaphuli Insights iyasebenza yokufunda umatshini ukuqonda ngoko nangoko ukuba ngubani owenza abaphulaphuli ojolise kubo, ngokuhlalutya unxibelelwano phakathi kwabantu abalubumbayo. Yiya ngaphaya kokwahlulwa ngokwesiko ngokweminyaka, isini kunye nendawo, ngoku ungafumana amacandelo amatsha ngokusekwe kwizinto ezithandwa ngabantu kunye qonda imarike yakho ekujoliswe kuyo ngoku kwinqanaba elinzulu. Iqonga labo lobuntlola kubaphulaphuli likuvumela ukuba uthelekise amacandelo kunye neziseko okanye abanye abaphulaphuli kwaye wenze ibhenchmark enamacandelo ahlukeneyo, amazwe okanye nabanye abantu okhuphisana nabo.
Umnikazi wedatha yakho -dibanisa Abaphulaphuli Insights ngedatha yakho okanye imiboniso. Thumela ngokulula iingxelo zakho ku PDF or PowerPoint Iifomati zokusebenzisa eyona mbono ifanelekileyo malunga nabaphulaphuli bakho kwiidekhi zakho zokubonisa. Okanye, thumela ngaphandle ulwazi ngalunye ku a CSV ifayile ukuze uqhubekise ngokulula, wabelane okanye uzidibanise kumbutho wakho.
Uyenza njani iNgxelo yoBukrelekrele bakho baMahala
Nantsi ividiyo eshwankathelayo malunga nendlela yokusetyenziswa Abaphulaphuli's isicwangciso sasimahla sokwenza ingxelo yeInsights usebenzisa iwizard yokudala abaphulaphuli. Musa ukuvumela igama esisiseko Uyakubhanxa, nangona kunjalo. Ingxelo ibonelela ngedemografi, indawo, ulwimi, i-bio, iminyaka, intlalo-ntle, i-brand affinities, impembelelo ye-brand, umdla, ubudlelwane beendaba, umxholo, ubuntu, ukuthenga ingqondo, imikhwa ye-intanethi, kunye namacandelo aphezulu e-3!
Yakha uHlahlelo lwakho lweeMvambo eziSimahla zabaphulaphuli
Ukubhengezwa: Ndililungu le Abaphulaphuli kwaye ndisebenzisa ikhonkco lam kweli nqaku.
tags: uhlalutyo lwabaphulaphuliubukrelekrele babaphulaphuliimibono yabaphulaphuliuhlalutyo lweempawu zabaphulaphuliuphando lwebrandubukrelekrele okhuphisana nabouhlalutyo lwabathengiiprofayile yomthengiuhlalutyo lomlandeliulwahlulo lwabalandeliuhlalutyo lwempembeleloisahlulouhlalutyo lwabaphulaphuli kwimidiya yoluntuiprofayile yemidiya yoluntu
I-Marpipe: Abathengisi abaxhobileyo ngobukrelekrele kufuneka bavavanye kwaye bafumane uYilo lwentengiso oluphumelelayo